Kedu otu usoro ọrụ Amazon si achọ ọrụ?
Ọ dịtụla mgbe ị na-eche otú Amazon si ekpebi ọkwa nke ngwaahịa ọ bụla? Amazon na-eji ya pụrụ iche ogo algorithm nke a na-akpọ A9. Dị ka Google, Amazon na-ezobe na nzuzo otú ọrụ ha si arụ ọrụ algorithm na ọ bụ nanị Amazon maara n'ezie ihe ejikọtara n'ime usoro ogo ha.
Dịka nchọpụta ndị a na-eme n'oge na-adịbeghị anya, Amazon enyefela Google site na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-achọ ngwaahịa - ban rei ban. Ma mụ onwe m, ọ bụ ihe kachasị mkpa iji dochie ogo algorithm na nzuzo. O nwere ike ịbụ otu n'ime ihe mere algorithm ji na-eme ka Amazon dịwanye mma.
Dịka ndị nnọchianya nke Amazon, otu n'ime ihe ndị bụ isi ebumnuche nke Amazon A9 algorithm bụ iji nye ndị ọrụ ọrụ ọchụchọ kachasị mkpa. Ọ bụ ya mere ha ji agbalịsi ike inweta nsonaazụ kachasị mma ma melite ahụmịhe ọchụchọ nke onye ọrụ. A9 ogo algorithm na-amụta na-akpaghị aka ijikọta ọtụtụ atụmatụ bara uru. Nkọwapụta ahazi Amazon nwere ọtụtụ atụmatụ dị mkpa. Ya mere, Amazon nwere ike ịmụta site na nyocha usoro gara aga ma mee ka data a nwee ihe dị mkpa nye ndị ahịa. N'ụzọ dị otú ahụ, onye ahịa ọ bụla dị na Amazon nwere nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ dị iche iche dabere na ndị nchọpụta ya gara aga, ịzụrụ, na mmasị. A na - emetụta nsonaazụ ọchụchọ niile ma debe ya n'ime usoro nke ihe kachasị mkpa nye onye ọrụ ahụ.
N'okwu a dị mkpirikpi, anyị ga-atụle isi ihe ndị dị n'ime na nke dịpụrụ adịpụ na-emetụta ọnọdụ Amazon na ihe ndị ọzọ nke Amazon na-eburu n'uche inye ụfọdụ ọkwa maka ngwaahịa ọ bụla.
Ihe ndị dị n'ime ụlọ Amazon
Ihe ndị dị n'ime akụ Amazon na-achọpụta na ngwaahịa ndị a gụnyere:
Enweghị usoro ntụziaka doro anya nyere maka otú e si kpebie ikpe Amazon. Otú ọ dị, anyị nwere ike ịsị na Amazon na-echebara ihe ndị dị ka ọnụọgụ na njiri nke nyocha ndị ọrụ na ọkwa ihu igwe ọ bụla..Ọzọkwa, Amazon na-agụta ọnụ ọgụgụ nke clicks site na ọchụchọ na ihe omume ndị ọzọ na-akọwa njirimara ọchụchọ nke onye ọrụ.
Nke a dị ka ihe dị mkpa, ma na-enweghị nhazi na nkọwa nke nyocha ahụ, a na-ahapụ anyị n'ọchịchịrị .
Ahịa ahịa azụmahịa
Ihe niile Amazon mere bụ otu ihe mgbaru ọsọ n'uche. Nke ahụ bụ ime ka uru na-abawanye uru ma nweta ego ha ga enweta. Ma, ọ ka edoghị anya ihe Amazon ji mee iji hụ ma tụọ ọnụọgụ ahịa azụmahịa dị egwu.
Ahịa arụmọrụ Amazon
Nlekọta ndị ahịa bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị mkpa Amazon na-echebara iji chọpụta otú ị na-eme ere na Amazon. Ndị ahịa ahịa ugbu a nwere ike ịlele otú ha si eme maka afọ ojuju ndị ahịa, na-ezo aka na Dashboard Health Account.
Olee ihe nwere ike imetụta ọnọdụ Amazon gị?
Ahịa ahịa bụ ihe dị mkpa nke ọrụ Amazon nke nwere ike imetụta ọnọdụ ngwaahịa gị na saịtị nsonaazụ ọchụchọ. N'ihe dị elu karịa ahịa gị, ọ dị mma ka akara gị dị mkpa mgbe ndị ahịa na-achọ ngwaahịa ha na-aga ịzụta. Iji meziwanye ahịa gị na Amazon, ị ga-achọ ịme ihe ndị ka mma.
Pịa Site Ọnụego
Mgbe onye ọrụ tinye ntinye ya n'ime igbe nyocha Amazon, ọ ga-eche n'echiche ịzụta ihe. Iji gbaa onye ahịa ume inye iwu, Amazon na-enye ndepụta nke ngwaahịa ndị algorithm gbanwere ma depụta ha n'usoro n'usoro. Mgbe onye ọrụ na-enweta ndepụta nke ihe dị mkpa na ngwaahịa ọchụchọ, Amazon amalite nyochaa ihe ha pịa na-esote. Ya mere, Amazon ji ọnụ ọgụgụ pịa-site na ọnụego ma jikọta ọnụ ọgụgụ ndị a n'ime algorithm.